Soo dejisan SHAREit 3.5.48_ww – Android – Vessoft
Qeybta: Wadaag wadaaga
Bogga rasmiga ah: SHAREit
SHAREit – software ah oo haboon qaybsiga deg deg ah ee files. software The abuuraa Wi-Fi helaan dhibic iyo bandhigayaa liiska qalabka ku xiran, taas oo ka caawin kara in ay is dhaafsadaan files of iskeel oo kala duwan. SHAREit taageertaa kala iibsiga xogta in computer iyo qalab kala duwan oo isku mar ah. software ayaa sidoo kale ku jira shaqo ah kaas oo u ogolaanaya si ay u gudbiyaan xogta ka qalab ayaa midba midka kale. SHAREit leedahay interface ah dareen leh oo si sahlan loo isticmaali.
sarrifka xogta Fast
Shaqada xogta gudbaayo qalab kale
Simple iyo interface fududahay in la isticmaalo
Soo dejisan SHAREit
Faallo ku saabsan SHAREit
SHAREit Xirfadaha la xiriira
DropBox – qalab loo isticmaalo kaydinta daruuraha. Barnaamijku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad keydiso faylal kala duwan kaydinta daruuraha oo aad siiso guud ahaan marinka faylasha la soo degsaday.
Google Drive – waa keyd caan ah oo lagu keydiyo lagunala shaqeeyo feylasha noocyo kala duwan ah. Sidoo kale, softiweerku wuxuu awood u siinayaa inuu siiyaa marin u helista faylasha adeegsadayaasha kale tafatirka guud.
Imgur – softiweer si aad ugu soo bandhigto sawirrada kaladuwan iyo GIF-animation adeegga caanka ah. Software-ka ayaa awood u siinaya inuu qoro waxyaabaha uu jecelyahay oo uu faallo ka bixiyo qormooyinka.
GoDap – softiweer waxaa loogu talagalay in lagu beddelo feylasha noocyo kala duwan kombiyuutar ama aalado kale oo laga soo dejiyo fiidiyowyada adeegyada caanka ah ee fiidiyowga.
BlueMail – softiweer isku mar maarayn kara akoonno badan oo emayl ah oo ka imanaya bixiyeyaasha websaydhka hoggaamisa.
Maareeyaha Soo Dejinta Advanced – maamule ku habboon oo laga soo dejiyo xogta noocyada kala duwan. Softiweerku wuxuu u adeegsadaa algorithms-ka gaarka ah soo dejinta faylka dhaqso ah.
Ciyaaryahanka MFT oo taageertaa ugu qaabab warbaahinta. In codsiga waxaa jira qalabka ay u tags edit, dalban saamaynta audio adag iyo qaar badan.
Clash of Clans – ciyaar istaraatiijiyadeed oo lagu horumariyo tuuladaada isla markaana lagu ballaariyo dhulka iyadoo la adeegsanayo habka qabashada. Ciyaartu waxay isticmaashaa sawiro 3D fiican iyo qaabab kala duwan oo horumarineed.
G2A – softiweer raaxo leh oo leh kala duwanaansho ballaaran oo ka mid ah badeecadaha ciyaarta noocyada kaladuwan iyo qiime kala duwan oo ka socda aagga ganacsiga dijitaalka ah ee caalamiga ah.